I-Geofumadas, i-2011 Legacy - i-Geofumadas
NgoDisemba, 2011 egeomates My, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa
Unyaka uphawuleze, yonke into endiyifunayo ukulala phantsi kwintambo, ukulala iintsuku ezintathu ngokulandelana nokubuyisela ukulala okuqokelelwayo; vuka nje ukuba uthathe isobho sezilwanyana zasemanzini ukuba umama-mkhwenkwe akwenzayo, ama-donuts kwi-honey kunye ne-turkey eyasala ngobusuku ... u-uf! ezininzi iintsuku ezimbalwa.
Njengoko unyaka wonke, ukufika ngokuqhelekileyo kunzima ngenxa yokuba ukugqithisa kuboniswa ngokucacileyo. Abachwephezi be-14 kulo nyaka baye bangibonisa ukunyaniseka, inceba ukuba kufuneka uyiqhumise kwi-2011, kwaye ndinemiba enzima yokukhetha kubo kuphela i-6; nangona i-inshorensi inxalenye enkulu bayilungele ukuthabatha indlela entsha. Ndifunde okuninzi kubo, kwaye bavela kum, nangona kunjalo esinye isiqunto kunye nomculo ofanayo:
Ngaba ubuza ikhompyutha? ke ungenzi ubuqhetseba ngenxa yokuba.
Njengoko lwetheknoloji, unyaka uye kunye imixholo enomtsalane ezifana CivilCAD, Civil3D, Woopra, iPad, Plex.Earth, GIS Kit ... apho kuya kubakho ixesha ukususela tino ukubuyekeza ngomoyakazi ngaphezulu ukubikezela ezizalisekile kunye nento esinokuyilindela kwi-2012.
Kodwa emva ilifa 2011, usapho, utshintsho ezininzi, umntwana uyaqhubeka amaphupha akhe zobuntwana okokuqala kufuneka blog yabo, lo gama i-inkwenkwe bafunda izinto ezininzi kangaka sele ngexa: uphumelele umncintiswano weZendalo zeNzululwaziYena abavule Wii ukusebenzisa idiski utshiswe, xa kungekho CD umqhubi ngaphandle netbook bafunda niyitshise ngomlilo imifanekiso ISO kunye 120 Utywala, bafunda njani ukuba malivakale Taringa kunye Emudigital ... Ngenye indlela, omnye crazy.
Ewe, ndiyathanda le sithombe, iminyaka eyi-12 yatshintshile lo mntu ngokwenene ...
Kwaye i-Geofumadas, unyaka wokuqala wokufudukela eGeofumadas.com uzalisekile kwi-subdomain yangaphambili kwi-Cartesianos. Igrafu ibonisa indawo yangaphambili, kumbala obomvu ukusuka kwi-2008 ukuya kwi-2010 iminyaka.
Unyaka 2008. I-Geofumadas ayiqalanga kwinyanga kaJanuwari, yayineenyanga ezintandathu ngaphambili ukuba ayibonisanga kuba ilahlekelwa sisalamane sokuthelekisa, kodwa kwakwelo nani izibalo azithathanga kutyelelo zero ukuya kwi-7,500 XNUMX ngenyanga. Kwaphawuleka kuloo nyaka ukuqaqanjelwa kwenqaku «Indlela yokubulala ulwandle». Inani elipheleleyo lamatyelelo ayi-183,000 kunye nokujongwa kwamaphepha angama-442,000 ngo-2008.
Unyaka 2009, ukutyelela okwenziwa ngonyaka kufike kwi-330,000 kunye ne-850,000 ukubukwa kwephepha.
Unyaka 2010, lahlala lifana, ngokumahluko ekupheleni konyaka ukuwa kwaye kwabonakala ekubeni ukufudukela kwi-domain entsha kwindibano. Ukuhambela kwe-316,000 ngokupheleleyo kunye neembono zekhasi le-615,000. Ngomhla wokugqibela kaDisemba loo sayithi ivaliwe, kwaye kuphela idilesi ekuye yashiyelwa ukutyelela efike ngokuthe ngqo.
Kulo nyaka i-2011, i-Geofumadas.com iqalile ngokukhawuleza ukususela ekuqaleni, i-indexed entsha esuka ku-Google, isondlo esitsha, isakhiwo esitsha sekhonkco. Njengoko unako ukubona, kude kube ngoMatshi imoto yayingaphantsi komnyaka we-2010 kwi-subdomain ye-Cartesianos.com. Emva koko saqala i ukukhula umdla ngoMeyi wakwazi ukoyisa traffic inkulu baba 33,000 ngaphambili ngenyanga (ngaphandle dlalisa) kwaye ke ukususela ngo-Agasti ukuya kumhla luphakame kakhulu kunene 40,000 iindwendwe ngenyanga. Ubukhulu becala oku kungenxa yotshintsho algorithm Google ukuba bandiqumbise ukoyika ukuba siye sazenza imigibe wentsholongwane egazini, nangona ukufuduka kunye 4 ekuqaleni iinyanga Ndaba inkxaso inforSEO abo benza umsebenzi abalasela.
Unyaka uya kuvalwa kunye nohambo lwe-330,000, olufana ne-2009 kwi-Cartesians.
Kwakhona kulo nyaka ndiqale inguqulo eguqulelwe (egeomate.com), ukuba ngoxhaswa nguNancy, umhumushi wasePeru ufikelele kwisiqingatha somxholo. Kwakuba ngumnyaka onzima kwimpilo yale nkosikazi enesibindi, ngaphandle kokuba kunzima kangakanani ukuqonda izivakalisi ezithile kumxholo wam, abafundi abaqhelekileyo bayayihoxisa kwaye baqhubeka befunda; into ayenako.
Omnye umngeni kulo nyaka 2011 wangena ukuba ixesha social networks kuqala, kwaye usebenzisa Geofumadas.com njengendawo, hayi umsebenzisi siqu njengoko wazama ngaphambili.
I-Twitter ifinyelele phantse abalandeli be-1,000. Eyona mpu melelo ukuba unelisekile ukunikela, nangona kuncinci kakhulu kunenjongo yentlalo.
I-Facebook ifikelela phantse kwi-10,000 yabalandeli, nangona apha umxholo uhlukile kuba iqhosha "ndiyathanda" lilahlekisa ngakumbi kodwa ngobusuku obungenzi nto ufumana ubuhlobo obuhle.
I-LinkedIn isebenza ngenye indlela, kwaye yithuba elongezelelweyo lokuseka oonxibelelwano abaqeqeshiweyo.
Ewe, ewe, kusebenza. Nangona utshintsho inxaxheba ekulweni nemiba lowu wu fanaka phambi Thomas (administrator Cartesia) ukuba thina ngazo ngaphambili ukuba baphume kuloo subdomain, emva Cartesianos iya ku ngoguqulelo olutshana lwe WordPress kuthi ezintsonkothileyo. Kodwa ufunde lukhulu kule, ukusingathwa yayo kulula ukulawula inkangeleko, indlela umxholo, kuquka iindlela ezintsha nzima ubomi SEO eyaziwa.
I-2011 ingishiye ngabahlobo abatsha, oonxibelelwano abatsha, amaphupha amatsha, ngoku ndicinga ngoku ...
Kuthekani ukuba bekufanelekile?
Balala ingca epakini, inja zinikwe offline mobile, kunye intombazana leyo izibane smiling kum amehlo am kunye amashiya sakhe sasekhohlo ... kwaye amakhwenkwe ukutsala nam phezulu kwaye ukundinyanzela ukuba benze inyathelo Camel ...
Ewe, i-2011 ifanelekile.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ukuvelisa i-Google Earth Curve nge-AutoCAD
Post Next Quotes Custom Lungisa ngu uphindo ngqo kwiLizwi MicrosoftOkulandelayo "